Sajhasabal.com | Homeरोल्पाकि १८ बर्षीय पवित्रा भन्छिन- 'कि मलाई मेरा बुबा चाहिन्छ, कि प्रश्नको जवाफ'
Posted on: 07 Mar, 2017
कविता उपाध्याय/फागुन २४, रोल्पा । दश वर्षे सशस्त्र युद्धका बेला अपहरणमा परेका मिरुल, रोल्पाका पत्रकार धनबहादुर रोकामगरकी छोरी पवित्रा रोकामगरले रुँदै भनिन्, “मेरा बुबाको कलमले कस्को के बिगारेको थियो ? किन अनाहकमा मेरा बुबालाई बेपत्ता पारियो ? किन अझै पनि मेरा बुबाको अवस्थाका बारेमा राज्य बेखबर छ ? प्रचण्ड सरकार, कि मलाई मेरा बुबा चाहिन्छ, कि यो प्रश्नको जवाफ दिनुहोला ।”
दिलकुमारीका अनुसार तीन पटकसम्म तत्कालीन माओवादीले धनबहादुरको घर जलायो जसका कारण परिवारको सदस्य गुमाएको पीडा हुँदाहुँदै धनबहादुरको परिवारले अर्काे ठूलो पीडा सहनुपरेको थियो । त्यसैले जीवन रक्षाका लागि पछिल्ला दिनमा धनबहादुर कहिल्यै घर फर्कनुभएको थिएन ।
विसं २०६० तिरको कुरा हो धनबहादुरकी श्रीमती दिलकुमारी सुत्केरी भएपछि सुत्केरी सामग्री तथा केही रुपैयाँ लिएर धनबहादुर सुर्खेतबाट लिबाङ आउनुभएको थियो । १७ दिनकी सुत्केरी बुहारी घरमा छोडेर धनबहादुरकी आमा छोरालाई भेट्न लिबाङसम्म आउनुभयोे । आमाछोरा दुइरात लिबाङ बसेपछि तेस्रो दिनमा उहाँकी आमा घर जानुभयो भने धनबहादुर कार्य क्षेत्र सुर्खेत । तर दुर्भाग्य उहाँको अन्तिम यात्रा प्यूठानको जलुकेमै रोकियो ।
गएको दशैँमा स्कुल बिदा भएपछि पवित्रा घर गएकी थिइन् । उनलाई यसपालिको दशैँमा बुबाको धेरै याद आयो । अनि एल्बममा सजिएका फोटो हेर्दै गर्दा उनका बुबाले अपहरणमा पर्नुभन्दा अगाडि लेखेर पठाएको चिठ्ठी फेला पर्यो । पवित्राले दोहोर्याई तेहर्याई त्यो चिठ्ठी पढिन् ।
त्यसमा लेखिएको थियो, “छोरी पवित्रा र छोरा वसन्तलाई मीठो प्यार, अनि सम्झना । के गर्नु ? सन्तानको मायाले छट्पटाउँदा पनि घर आउन पाइँदैन । तिमीहरु ठूला भयौ भने मसँगै राखेर पढाउनेछु । चिठ्ठीमा राखेर रु छ हजार पठाएको छु घरखर्च चलाउनु । अपुग भए गाउँमा सापटी लिएर चलाउनु । नआत्ती बस जिन्दगी लामो छ । सधैँ समय निष्ठुरी बन्ने छैन । आज दुःख गरे भोलि सुखको दिन फर्कनेछ । उही तिमीहरुलाई माया गर्ने धनबहादुर .....”